Taliyaha ciidanka booliska oo ku baaqay in shacabka ay garab istaagaan ciidamada amniga By Mohamed M Hassan. – Mareeg Online
Taliyaha ciidanka booliska oo ku baaqay in shacabka ay garab istaagaan ciidamada amniga By Mohamed M Hassan.
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa ugu baaqay bulshada inay garab istaagaan ciidanka amniga si cadowga looga adkaado, lagana ciribtiro meelkasta oo ay kaga dhuumaaleysanayaan argagixisada Al-Shabaab gudaha dalka.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sareeyo Gaas Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar)
Taliyaha oo ka hadlayay isu soo bax ka dhan ah falkii 28-ka December ee sanadkii tegay ka dhacay isgoyska Ex-koontarool Afgooye, halkaasi oo ay shacab fara badan iyo ciidan boolis ah ku xasuuqeen ayaa shacabka ka dalbaday inay garab istaagaan ciidanka amniga.
“Ummadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan waxaan u caddeynayaa in dalkan uu yahay dalkiina, waxaana la idinka rabaa inaad ka qeyb qaadataan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, oo aad ku garab istaagtaan ciidanka maskax iyo maal intuba, runtii dalkan duulaan baa lagu yahay, marka waa inaan is garabsanaa oo aan hal meel uga soo wada jeesannaa argagixisada maatada laayneysa”” ayuu yiri Taliyaha ciidanka.
Sareeyo Gaas Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa tilmaamay in dhagarqabayaashu ay ku dhex dhuumaaleysanayaan shacabka, bulshadana looga baahanyahay inay xoojiyaan la shaqeynta laamaha amniga, si cadowga looga adkaado.
“Waxaan ka codsanayaa shacabka degmooyinka Gobolka Banaadir degan inay la shaqeeyaan ciidamada, Dalkaaga qof kale haku haleyn, sida aad uga fekereyso gurigaaga ee aad ka soo toostay isna uga feker dalkaaga oo aan gacmaha is qabsano oo la shaqeyno ciidamada, si loo guud ahaan dalka looga sifeeyo Al-Shabaab’ ayuu yiri hadalkiisa ku daray Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya.
XASAASI: Beesha Abu Mansuur Oo War Cusub Kasoo Saartay Xarigiisa
Faah faahin:-Al-shabaab oo weerar ku qaaday Gaari ay la socdeen dad shacab ah
Guddoomiyaha G/Banaadir oo fariin Culus u diray Al-shabaab
DAAWO VIDEO:Madaxweyne Xaaf oo gaaray Gaalkacyo iyo Afar qodob oo ka dhan ah dowladda uu...